Iyo 10 Inonyanyozivikanwa Anabolic Steroids Raws Material | AASraw Steroids
I10 Inonyanya Kufarirwa Anabolic Steroids Raws Material
Posted on 07 / 18 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
Zvinoenderana nezvedu rapfuura 4 makore ekutengesa data base uye kwakasiyana kubvunza, isu takapfupisa iyo 10 inonyanya kuzivikanwa anabolic steroids (AAS) zvinhu zvakasviba zvehukama zvine hukama, vatengesi nevatengi.
Isu takadzikisa pasi indasitiri yepamusoro yezvitatu zvakabudirira zvigadzirwa. Kuti uwane yakazara runyorwa, tarisa iyo yepamusoro 10 yakakurumbira anabolic steroid raw raw.
Yakakura Kubata Kwekutengesa AAS Raws zvinhu: Yakanakisisa Bulk Gain ine Chadhura Mutengo Inasungwa AAS Raws zvinhu: Yakanakisisa Yepakati Pese Oral AAS Raws zvinhu:
Testosterone Enathate / Testo E / Test E poda
Rating:★★★★★ Trenbolone Acetate / Tren Ace / Tren A poda
Rating:★★★★★ Methandrostenolone / Dianabol poda
Iko kukuru kutengesa AAS mbichana zvinhu kubva kwatiri
Chinyorero chiri nyore uye chakachipa cheAAS chinwiwa
Trenbolone Acetate poda yakasviba yakasimba kupfuura Trenbolone Enanthate nekuda kweEnanthate ester inotora yakawedzera masimbi mukomponi.
Vazhinji vashandisi vekutanga kuenda neTrenbolone hormone nguva dzose ndeye Trenbolone Acetate poda yakasviba.
Dinandrol inogona kubatsira chaizvo pakuvaka.
Mhedzisiro yeDinandrol iri nyore kubatabata pane imwechete yekushandiswa inobviswa kana ichienzaniswa nesodaidhi
Heano Heano Kumusoro 10 Akakurumbira Anabolic Steroids raw zvinhu:
Testosterone Enathate mbishi yakasviba - Yakanyanya Yakakurumbira Yakakurirwa Ingeneti Steroids
Methandrostenolone raw poda - Yakanyanya Yakakurumbira Oral Steroids
Trenbolone Acetate mbiriso yakasviba -Kukwira Kwesimba Kwakaisirwa Steroids
Oxandrolone poda yakasviba -Akanyanya Kuzivikanwa Vakadzi Vanoshandisa Oral Steroids
Stanozolol yakasviba poda - Akanyanya Kupfuura Lean Gain Oral Steroids
Hormone Yekukura Kwemunhu - Yakanyanya Kuzivikanwa Peptide
Nandrolone Decanoate poda yakasviba - Yakanyanya Yakadzika Underrated steroid
Boldenone Undecylenate yakasvibirira mvura -Kunyanya Kureba Kureba-anobata steroid
Drostanolone Propionate poda yakasviba - Yakawanda Yakanyanya Exotic steroid
Methenolone Enanthate poda yakasviba -Kunyanya Kureba Zvidiki Pasi Side Mhedzisiro yemahara
Iko kune mashoma mashoma akakosha ekutarisa kana uchisarudza Anabolic Steroids. Kune ma Lab, zvigadzirwa zvakakurumbira zvinoda kugadzirwa mumapiritsi kana macapura. Midziyo yacho ichave inomhanyisa, piritsi inodhinda, capter set, kapini yemuchina, etc. Midziyo yakadaro inodhura kwazvo asi ichabatsira kuvaka mabrows ako uye kuwana bhizinesi rakareba.
Oxandrolone (Anavar) poda yakasviba
Stanozolol (Winstrol / winny) poda yakasviba
Methandrostenolone (Dianabol) poda yakasviba
Mazhinji eTestosterone akatevedzana
Mazhinji emhando yeBoldenone
DIY uye Homebrewer
Ita-iwe-iwe pachako (DIY) vabiki vepamba vari nani kutanga kubva nyore kurumidza kugadzira steroid, ine zvishoma yakanyauka yakanyungudika uye inowanzoonekwa sol solge uye inotakura oiri. Iyo yakakurudzirwa ma-steroid inogona kuwanikwa sezviri pasi apa:
Nandrolone Decanoate (DECA) poda yakasviba
Nandrolone phenylpropionate / NPP poda
Trenbolone Acetate mbiriso yakasviba
Boldenone Undecylenate / Equipoise yakaomeswa mvura
Drostanolone / Masteron Enanthate poda
Drostanolone / Masteron Propionate poda
Teststeorne Enanthate yakasviba hupfu Methandrostenolone raw poda Trenbolone Acetate mbiriso yakasviba Oxandrolone poda yakasviba Stanozolol yakasviba poda Human Growth Uwandu hwemakemikari Nandrolone Decanoate poda yakasviba Boldenone Undecylenate yakasvibirira mvura Drostanolone Propionate poda yakasviba Methenolone Enanthate poda yakasviba
1. Testosterone Enanthate poda yakasviba
Testosterone Enanthate poda yakasviba ndeyakachena testosterone ine inononoka-kuita kwenguva refu ester yakabatanidzwa uye ndeye testosterone yekuzivikanwa yakakurumbira. Kufanana neye Propionate vhezheni ndiyo imwe yemhando dzakajairika kushandiswa pasi rese nekuita zvinosimbisa vatambi. Kana zviri zvekushanda zvinoshanda zveTestosterone Enanthate, izvo chaizvo zvawanikwa zvichawanzo kuwanikwa mukuenzanisa neiyo Propionate shanduro yekufungidzira madosi yakafanana.
2. Methandrostenolone raw poda
Methandrostenolone raw poda inomiririra inozivikanwa uye imwe yeanonyanya kukosha anabolic steroid yenguva yese. Pasina mubvunzo, iyi ndiyo inonyanya kuzivikanwa yemuromo steroid yakamborova musika uye imwe yeanonyanya kuzivikanwa steroid mune chero chimiro. Kunyange zvichida kuwanikwa piritsi remuromo, Methandrostenolone poda yakasviba inogona kuwanikwa senge solution, asi mahwendefa anomiririra nzira yekutanga yekutonga.
3. Trenbolone Acetate poda yakasviba
Iyo acetate ester ipfupi-keteni ester yakabatana neiyo Finaplix molekyuli. Iine hupenyu hunoshanda hwe2-3 mazuva asi kuchengetedza huwandu hweropa re trenbolone yakasimudzwa uye yakatsiga, jekiseni rezuva nezuva rinowanzo kurudzirwa. Iyo acetate ester inopa kukurumidza uye kwakanyanya kusimbisa kwehomoni iyo inobatsira kune avo vanotsvaga vanokurumidza kuwana, pamwe chete nekukurumidza kujekesa nguva iyo acetate ester inogona kubviswa pakutanga kwekunetseka kwakashata.
4. Oxandrolone mbanje poda
5. Stanozolol raw poda
Nepo imwe yeanonyatsozivikanwa anabolic steroid, Stanozolol raw poda yakakurumbira kwazvo pakati pevakawanda mune iyo steroid inoshandisa huwandu. Iyo iri munzira dzakawanda iyo ine unyoro anabolic steroid inogona kushandiswa zvakachengeteka nevarume nevakadzi. Zvakakoshawo, yakaratidza kuve inoshanda kwazvo kune akawanda maitiro ekuvandudza mabasa.
6. Kukura Kwemunhu Hormone
7. Nandrolone Decanoate poda yakasviba
Nandrolone Decanoate poda yakasviba ndiyo imwe yeanonyanyo shandiswa anabolic steroid pakati pekuita basa inosimbisa vatambi. Izvo zvinozivikanwa nekuve zvinoshamisa zvinobatsira off-mwaka misa yakawanda steroid, asiwo inofarirwa mumazhinji emakwikwi madenderedzwa ayo ekurapa. Nekuda kwekubatsira kwayo kwakanyanya kurapa, iyo Nandrolone hormone ndiyo imwe yeanobatsira anabolic steroid mune zvekurapa
8. Boldenone Undecylenate yakasvibirira mvura
Boldenone Undecylenate raw fluid iri testosterone inotorwa anabolic androgenic steroid uye iri rakashandurwa chimiro che testosterone. Iko kushanduka kushoma kwazvo mune yakawedzera kaviri chisungo pane kabhoni imwe uye mbiri chinzvimbo. Iyo Undecylenate ester inobvumira kuburitswa kwepamusoro muBoldenone inenge 3-4 mazuva mushure mekukuvara, nekufamba zvishoma nezvishoma kusunungurwa kwehomoni yekutevera kwemazuva angangoita 21.
9. Drostanolone Propionate poda yakasviba
Iyo yakawanda yevese Masteron pamusika ichave Drostanolone Propionate mbanje yakasviba. Drostanolone Propionate poda yakasviba ndeye dihydrotestosterone (DHT) inotorwa anabolic steroid. Kunyanya, Masteron ndiyo DHT mahormoni iyo yakashandurwa nenzira nekushongedzwa kwechikwata che methyl panzvimbo yemabhonzo 2 chinzvimbo, Izvi zvinodzivirira mahormone kubva pakuputsika kwemetabolism ne3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, inowanikwa mune tsandanyama yemabhonzo. Iyo inowedzerawo zvikuru iyo yemahara yeanabol anabhu.
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa pakati peavo vanhu vari kukwikwidza kana kutsvaga yakawedzera yekushongedza muviri
10. Methenolone Enanthate poda yakasviba
Methenolone Enanthate poda yakasviba inoonekwa seimwe yakachengeteka anabolic steroid pamusika uye inotakura yakanakisa yekuchengetedza chiyero kuti udzore ichi chikumbiro. Muchokwadi, iyi steroid yakashandiswa zvakabudirira kurapa vana vasingakwanisi uye vacheche vasati vambokuvara pasina kukuvara. Iyo inorayirwawo kune osteoporosis uye sarcopenia.
Genius AAS Raw sosi kuti Inofungidzirwa Usati Kutenga
Kana zvasvika kune zvakasvibirira zvigadzirwa zvekugadzirwa kweasididid, vazhinji vanokurumidza kutarisisa kugadzirwa kunowanikwa muChina. Izvo pano zvigadzirwa zvekugadzirwa kweanabolic zvinotumirwa kune dzimwe nyika. Raw zvinhu zvemaSmallids kubva kuChina zvinofarirwa nezvikonzero zvinoverengeka:
Zviri kuChina zvine mhando yepamusoro.
Kuteerana nezviyero zvese.
Kuvapo kwemvumo yekugadzira uye kutengesa.
Natural uye yepakutanga powders, ayo anogona kare kushandiswa kugadzirwa.
Iyo poindi yekupedzisira kune vazhinji vagadziri vema-steroid ndiyo yakakosha. Izvi zvinodaro nekuti ndiyo nzira iri nyore yekuita tenga zvigadzirwa zvemakwenzi kubva kuChina. Kune akawanda makambani anobatanidzwa mukutengesa pano, uye hapana chikonzero chekupa mamwe magwaro ekutenga zvinhu. Izvi hazvireve kuti kuChina iwe unogona kutenga zvigadzirwa zvekugadzira kumba. Kwete, kune mafekitori makuru nemakambani ari kutengesa zvinhu chete kune vanogadzira. Kuti utenge inokwana mvumo yakakwana yekugadzira uye akawanda masitifiketi emhando.
Mamwe makambani anoda mamwe magwaro, saka usati watenga poda yekugadzira steroid, zviri nani kuti ubvunze nekambani ubvunze kuti ndeapi magwaro anodiwa ayo. Izvo chete mushure meizvi, izvo zvigadzirwa zvemaoids zvinobva kuChina zvinogona kutengwa uye kuunzwa kune nyika uko kugadzirwa kweanabolic and androgenic steroid gadziriro.
Asi, kune maLebhu epasi pevhu (ugl) kana yako pachako, hazvigoneke kuti iwe upe chero tsamba yekunyora kana mvumo yekungenisa kunze kwechinangwa chakadaro chebhizinesi, pane masosi akatenderedza musika kuti aenderane nokudiwa kwakadaro. Nekudaro, usati watenga izvo zvisvinu zvaunoda, edza kutsvaga izvo zvinyoro uye nehungwaru, kuti uzvidzivirire kubva pane izvo zvisiri izvo.
1. Nzira yekuona sei chigadzirwa mhando usati waisa mirairo?
A: COA, HPLC, HNMR iripo.
B: Mapepa ekuedzwa neyechitatu bato labs achapihwa nguva nenguva.
2.Angavimbisa sei mari yako yakachengeteka?
Yese mirairo yeyedu poda yakasviba inogona kudzoserwa zvinhu zvisati zvatumirwa kunze.
3.Can iwe unovimbisa kuwanikwa kwekuwanikwa?
4.Angatanga sei kuraira uye kubhadhara?
Kubatsirwa kubva kuAnabolic Steroids Raw zvinhu
Kwete pasi peyero doses kubva kune dzimwe nzvimbo dzepasi pebhu, kana uchizvibhurura zvako.
Mutengo wakaderera wedenderedzwa rako kuti ushandise giya rako rakabikwa. Kunyangwe munhu ane mari shoma anokwanisa kuzadzisa kurota kwekuvaka muviri.
Kuti utengese zvekare izvo zveAAS zvigadzirwa kuti uve mupfumi
Kuvaka yako brand uye kuva chimwe chinhu mudenderedzwa iri
Kuita tsvakurudzo nezve mashandisiro uye kubatsira vamwe.
DECA powder-Mazano Ekupedzisira Nzira Yokuita Nandrolone Decanoate (Durabolin) Ko MK-677 (Ibutamoren) inoshanda zvakanaka Kune Musha Kuvaka? Ongororo Yekutsamwa [2019 NEW]